Metrobus လိုင်းအချက်ပြ! | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Metrobus လိုင်းအချက်ပြ!
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metrobus, တူရကီ 0
Metrobus လိုင်း၏သိပ်သည်းဆဖြစ်သော Istanbul ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသက်သွေးကြောကို Istanbul Metropolitan Municipality Assembly ၏အစီအစဉ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။ Altunizade မှတ်တိုင်ကိုအသုံးပြုပြီးခရီးသည်အရေအတွက်တိုးလာသည်။
SözcüOzlem Guvemli'nin ၏အစီရင်ခံစာအရ, တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမီဘတ်စ်လိုင်းများသည်သန်းပေါင်းများစွာသောခရီးသည်များတင်ဆောင်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရှိတိုက်ကြီးနှစ်ခုကြားမှာအာရုံစူးစိုက်စေသည်။ IMM ညီလာခံကောငျးပါတီအုပ်စု Sözcüသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်။ Suat Sari, အစီအစဉ်ကိုပယ်သည်သူ၏မိန့်ခွန်း၌၎င်း, စဉ်ဆက်မပြတ်ပျက်ကွက်မှုကိုအလေးပေးရန်ပျက်ကွက်သောမော်တော်ယာဉ်များ၏နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးသက်တမ်းကိုညွှန်ပြသည့် 545 metrobus ပင်။
သိုလှောင်ရုံမှာ 27 PHILLEAS အမြစ်တွယ်နေတယ်
1.2 ခရီးသည် Phileas အမှတ်တံဆိပ်ယာဉ်များ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူသူတို့ထဲကယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကို 258 အတွက် Metrobus လိုင်းက 12 ရဲ့သက်တမ်းကိုညွှန်ပြသည်။ နည်းပညာအရပြXနာများကြောင့်အဝါရောင်၊ Sarı၏တွေ့ရှိချက်များအရ 50 ခရီးသည်တင်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် 27 ယူရိုစွမ်းရည်အမှတ်တံဆိပ်ယာဉ်များသည် 165 ၏အသက်အရွယ်သို့ရောက်ရှိပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် 400 ယူရို Connecto အမှတ်တံဆိပ်ယာဉ်များသည် 12 နှစ်များအတွက်ခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
အမြဲတမ်းခရီးသည်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်ယာဉ်များကိုပုံမှန်မထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ကာလအတွင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်သည့် Suat Sari ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
- ယာဉ်မောင်းများနှင့်ယာဉ်များနည်းပါးလာသည်။ ယာဉ်မောင်းသူအများစုသည်တစ်နေ့လျှင် 10.5 နာရီကို run သည်။ ခရီးသည်များအကြားပြင်းထန်သောပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများသည်ယာဉ်မောင်းများကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အဆိုပါယာဉ်မောင်း psychotic ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအသွားအလာစိတ်ပညာရှင်များကပြန်လည်ထူထောင်ရန်လိုအပ်သည်။
- အလွန်နည်းသော BRT ယာဉ်မောင်းများ။ 100-200 ကိုယာဉ်မောင်းအသစ်ထဲသို့ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါယာဉ်များလည်းပြproblemနာရှိပါတယ်။ Metrobus တာယာများကိုတာယာများနှင့်ဖုံးထားသည်။ သူတို့၏စီးပွားရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောဘတ်စ်ကားများသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအမှားများနှင့်အတူရေနံယိုစိမ့်သည်။ လမ်းပေါ်သို့ရေနံယိုစိမ့်မှုသည်မတော်တဆမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ လမ်းမျက်နှာပြင်ကအရမ်းကွဲနေတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူ၏မတော်တဆမှုမှတ်တမ်းက 15 လမ်းပြproblemနာကိုညွှန်ပြသည်။
ဒေါက်တာ မြေအောက်ရထားလမ်းသို့သွားမည့်အစီအမံများကိုထိတွေ့ခြင်းဖြင့်အဝါရောင် metrobus မျဉ်းကြောင်းနှင့်စီစဉ်ရန်စီစဉ်ထားသော Marmaray လက်စွပ်ခရီးစဉ်များကိုအလယ်အလတ်ရပ်နားထားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ALTUNİZADEတွင် PASSENGER ပေါက်ကွဲမှု
CHP အုပ်စုတစ်စု SözcüSu Tariq Balyal သည်အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကိန်းဂဏန်းများကိုလည်းပေးခဲ့သည်။
- 2018 နှင့် 2019 တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Metrobus လိုင်းတွင်4ခရီးသည်တိုးသည်။ Altunizade မှာအထူးအခြေအနေရှိတယ်။ 2018 နှင့် 2019 ရှိ9သည်ခရီးသည်တင်လတွင် 37,4 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးကဲသောတိုးတက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။
- ဇူလိုင်လတွင် 66.4၊ သြဂုတ်လတွင် 45.7 နှင့်စက်တင်ဘာလတွင် 40.9 တိုးလာခဲ့သည်။ 2018 သန်း9ခရီးသည်တစ်သိန်းသည်5၏ပထမ 533 လတွင်ဤဘူတာကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီး 2019 သန်း7ခရီးသည်တစ်သိန်းသည် 557 ပထမကိုးလတွင်ဘူတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အတိအကျရာခိုင်နှုန်း 37,4 တိုးမြှင့်။
- Çekmeköy-Sancaktepe မြေအောက်ရထားကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ Altunizade ဘူတာရုံအရစီမံကိန်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သိပ်သည်းဆအလွန်များပါသည်။
Yenibosna Metrobus မြေပေါ် Alarm ဖြစ်ပါသည် 10 / 10 / 2015 Yenibosna Metrobüs Overpass Alerts: E-5 ပေါ်ရှိ Yenibosna Metrobus အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားသောအက်ကြောင်းများသည်နိုင်ငံသားများအားစိတ်ရှုပ်စေသည်။ Yenibosna ရှိ E-5 ပေါ်တွင် Metrobus မြေအောက်လမ်းကြောင်း
လက်စွပ်လမ်းမကြီး Alarm ဖြစ်ပါသည် 22 / 05 / 2014 Ring Road Alarm - တန်ချိန်အလွန်ကြီးမားသောပြိုကျမှုကြောင့် akkanakkale ၏ Lapseki ခရိုင်သည် Izmir-Bursa အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို ဖြတ်၍ လမ်းများနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သည်။ Lapseki ခရိုင်တွင်လမ်းနှစ်ဆဖောက်ခြင်းကြောင့်…
TCDD6။ မီးသတ်စခန်းအဆောက်အဦးနှင့် 33 အမျိုးမျိုးဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဘူတာ Setup ကိုလေလံအတွက်တစ်ခုချင်းစီနှိုးဆော်သံစနစ်က 06 / 07 / 2012 တင်ဒါတာ ၀ န်ယူမှုရှိသူ - Hasan Mutluay တင်ဒါမန်နေဂျာဖုန်း - 03224575354 တင်ဒါမန်နေဂျာဖက်စ် - 03224592354 ကြေငြာသည့်နေ့ရက် - 22.06.2012 00: 00: 00 တင်ဒါနေ့ - 16.07.2012 00: 00: 00-14.00 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စျေးနှုန်း - 250 TRY တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း - အလုပ်များ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်: 2012 / 77920 မေးလ်: 6bolgeemlakveinsaat@gmail.com TCDD6REGION ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထူထောင်ကင်မရာလုံခြုံရေးစနစ် & မီးသတ်နှိုးစက်စနစ် 22 / 11 / 2012 ကင်မရာလုံခြုံရေးစနစ်နှင့်မီးသတ်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်းယူနစ်တင်ဒါ UNIT 3.REGION PROCUREMENT PROCUREMENT PROCESS ကော်မရှင်ကော်မရှင်တင်ဒါတင်ဒါတင်သွင်းသူတင်ဒါလိပ်စာ TCDD FACILITY 3.REGION DIRECTORATE / İZMİR PHONE …
Yenibosna Metrobus မြေပေါ် Alarm ဖြစ်ပါသည်
လက်စွပ်လမ်းမကြီး Alarm ဖြစ်ပါသည်
နှိုးဆော်သံအဆိုပါ Marmaray အတွက်ထိတ်လန့်စေ၏